Indawo entle yokuhlala yenkulungwane kwisitrato esithe cwaka
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguNate
Yonwabele indlu yethu entsha enegumbi lokulala eli-1 kwisitrato esithe cwaka esinendlela enye, amanyathelo asuka kwi-Exhibition Park kunye nohambo olufutshane ukuya edolophini ebukekayo iGuelph. Ngokuhonjiswa kwelizwe-chic kunye neempawu ezizodwa (njengocango lwebhanti olutyibilikayo, iitafile ezihlala emphethweni kunye nebhedi ye-barnwood), sisiseko sekhaya esigqibeleleyo sokufumanisa konke uGuelph anokubonelela. Ngendawo yokupaka yasimahla yesitalato, indawo yokungena eyahlukileyo, ikhitshi lakho kunye negumbi lokuhlambela eliphangaleleyo (elixhotyiswe ngentloko yeshawari yemvula yaseKolher), usenokungafuni ukuhamba!
Le yindawo esezantsi ekhangayo, eqaqambileyo nesanda kulungiswa kwinkulungwane yendlu eneempawu ezininzi. Ibekwe kuhambo lwemizuzu emi-2 ukuya kwiPaki yoMboniso kunye nohambo lwemizuzu eli-10 ukuya kumbindi wedolophu, ineendawo zokutyela ezinkulu, iivenkile zekofu, ii-pubs, ubomi basebusuku, iimyuziyam, iigalari zobugcisa kunye nemarike yomfama ngeMigqibelo.
4.96 ·Izimvo eziyi-26
Indawo yasebumelwaneni yePaki yoMboniso iqhayisa ngabantu abaninzi, imithi ekhulileyo, izindlu zenkulungwane kunye neendlela zokuhamba. Ukujikeleza ikona ukusuka kwindawo enkcenkceshela iPark Grocery kunye neGrain bakery, kunye nohambo olufutshane ukuya kwiThala leeNcwadi loLuntu laseGuelph, indawo yokutyela yase-Artisanale French Country Cooking, iMarike eNtsha yeegrosari kunye neshelf yeencwadi engakholelekiyo (ivenkile yeencwadi, icinema, ivenkile yekofu kunye nendawo yokutyela yonke. enye!), uya kuthandana nale ngingqi intle kodwa iphithizelayo.
Umbuki zindwendwe ngu- Nate
My wife (Kera) and I recently moved to Guelph from Toronto, and we love it here. We have lots to recommend based on what you're looking for so don't hesitate to ask :)
Indawo ibucala ngokupheleleyo ngaphandle kwegumbi lokuhlamba impahla ekwabelwana ngalo nathi. Ukuba ujonge indawo enonxibelelwano lwe-zero kunye nababuki zindwendwe, le ndawo isenokungafanelanga.
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$277
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Guelph